Yoke The’ Yoke Cafe & Restaurant – FoodiesNavi
Yoke The’ Yoke Cafe & Restaurant
By May Me Lin On December 26, 2017 0
Yoke The’ Yoke Cafe & Restaurant ဆိုင်ကို အမှတ် ၁၀၉၊ ကျောက်မြောင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ် (ကျောက်မြောင်းစတိုးအနီး) တွင်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်လေးရဲ့အပြင်အဆင်လေးက ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေ၊ ပုသိမ်ထီးလေးတွေနဲ့ တကယ့်ကိုမြန်မာ့ရိုးရာစတိုင်လေးပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက် စားသုံးသူတွေလည်းဆိုင်ထဲဝင်တဲ့အခါ စိတ်ချမ်းသာစေမယ့်၊ စိတ်ကိုပျော်ရွှင်သွားစေမယ့်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖွင့်ထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့အတွက် သိပ်မသိကြသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာရရှိနိုင်တဲ့အစားအစားလေးတွေကတော့ ….European Snack Food မျိုးစုံ (Buger,HotDot,Sandwich,Fish&chip,Fish Finger, Potato Stick…….)-Chinese Food မျိုးစုံ (ကြာဇံကြော်၊ခေါက်ဆွဲကြော်၊ထမင်းကြော်၊ကြက်ကုန်းဘောင်၊ကြက်ချိုချဉ်၊ကိုက်လန်ကြော်……..) စတဲ့သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Cafe အပူ၊အအေးမျိုးစုံ(Expresso,Cappuccino,Mocha,Americano,Latte,Chocolate,GreenTea……)-Frappe (Mocha,Cappuccino,Vanilla,Hazelnut,Chocolate)-Fresh Fruits Juice မျိုးစုံ (ရာသီပေါ်သီးနှံများ)-Yoghurt (Banana,Blueberry,Papaya,Strawberry)-Soda (Strawberry,Blueberry,Kiwi,Pomegranate) စတာတွေလည်းရရှိနိုင်တဲ့အတွက် အစားအစာချစ်မြတ်နိုးသူတွေကြိုက်နှစ်သက်စေမယ့်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးမှာအရမ်းကိုရောင်းရတဲ့အစားအစာတွေကတော့– Chicken Burger, Smoothie, Frappe, Cocktail and Chicken Sweet & Sour တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုအရသာရှိလှတဲ့အစားအစာအစုံရရှိနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျောင်းမြောင်းဘက်ရောက်တဲ့အခါ အရသာရှိလှတဲ့အစားအစာတွေဝင်စားလို့ရအောင်အစားအစာချစ်မြတ်နိုးသူတွေကို စားသောက်ဆိုင်ကောင်းလေးတွေဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ‘Birthday Party’ ပွဲလေးပဲကျင်းပချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုညစာစားပွဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ‘ Couple Dinner’ တစ်ခုဖန်တီးချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးအရသာရှိလှတဲ့ ‘ရုပ်သေးရုပ်’ Cafe ဆိုင်လေးမှာအစားအသောက်လေးစားပြီး အေးအေးဆေးဆေးစကားလေးပြောရင် ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေ၊ပုသိမ်ထီးလေးတွေနဲ့ Selfie လေးဆွဲလိုက်ကြရအောင်..
Yoke The’ Yoke Cafe & Restaurant Facebook Page : www.facebook.com/yoketheyoke/
In Restaurant Guides Tagged Burger, Cafe, Chinese Food, Cocktail, Cold drinks, European Snack Food, Fish & Chip, Fish Finger, Frappe, Hot Dot, Potato Stick, sandwich, Smoothie, Soda, Yoghurt Leaveacomment
အရသာမှာတကယ့်ကိုထူးတဲ့ Mr . Chef Cafe’ & Restaurant ….
အရသာရှိလှတဲ့ Home Cooking Style လေးစားချင်ရင်……